Zvinorevei distro? | Linux Vakapindwa muropa
Chimwe chinhu icho pandakasvika kunzvimbo yeLinux ndakaomerwa nekupinda mumusoro mangu chaive ichi:
Wese munhu paLinux anotaura nezve "iyo distro." Izvo distro izvi, chii icho distro ichi chimwe, chii distro iri nani pane imwe distrochii chirikuita distro anobva musikana mudikichii chirikuita distro ndezvevarume.
Sezvo iwe uchishandisa Windows, haufanire kuziva kuti chii «kugovera', Asi hazvina kuoma kunzwisisa.
Kutanga, ngatiti "Distro" izwi risingazivikanwe uye zvinoreva "Kugoverwa". Inofanira kucherechedzwa kuti GNU / Linux inouya kubva kune yakanyanya nerdy uye geek nyika iripo, saka kuti umise GNU / Linux paPC mune iwo makore ekutanga enguva yepenguin, apo pasina munhu aiziva kuti izvi zvaivepo, iwe waifanirwa kuve a master computer saenzi kuti izvi zviiswe. Panguva iyoyo, hapana munhu aive ari muchiitiko chekuti Linux inogona kuve nemukurumbira.
Pakatanga boka reLinux, vakaona kugona kwayanga iine uye izvo Linux yaizove "inoshandiswa" system pakombuta yemunhuwo zvake aisakwanisa kupedza mazuva akati wandei achiunganidza tsanga nezvimwe zvinhu zvakawanda zvaidikanwa kuitira kuti hurongwa hwungotanga kushandiswa zvishoma. Pavakaona chinhu chakadai, ndiko kuti, kwaingova kupambadza kukuru kwenguva kune munhuwo zvake, asi zvakare zvaive zvisingaite kuti vashandisiwo zvavo vauye kuzonzwisisa maitiro zvakakwana kuti vazviite vega, vakafunga kurerutsa maitiro aya.
Pakati pe1992 na1993, kuiswa kwe GNU / Linux yakafanogadzirirwa kuiswa neiyo wizard maitiro uye akati wandei mirairo, chenjera, yanga isiri mhepo, iwe waifanirwa kuziva chaizvo zvawanga uchiita kuti ukwanise kufambira mberi. Kubva ipapo kwakamuka "migove" yakadai se: SLS, TAMU, Yggdrasil Linux, pakati pevamwe.
Kudzokorora, kugoverwa kweLinux imhando yeGNU / Linux pack yakagadzirirwa kuiswa nehumwe kureruka.
Mushure mekunge zvaiitika zvave kuzivikanwa nhoroondo, vanhu vakatanga kubvunza kuti kuiswa kweLinux kuve nyore seiya inopihwa neWindows, iine "yakanaka" nharaunda yekuona, ine wizard (Inotevera, inotevera, inotevera) uye yakagadzirirwawo kutevedzera mamwe mabasa , neimwe nzira. Distros yanga isisiri nzira yakapusa yekuisa Linux, ikozvino kusarudza kugoverwa kweLinux kwairevawo kusarudza nzira yekushanda.
Musiyano uripo pakati pe "distros"
Izvo iwe zvaunonyatso funga kana kufungidzira ndezvekuti "distros" akasiyana kubva kune mumwe nemumwe, ikozvino unonzwisisa kuti idzi inzira dzinobatsira mushandisi kushandisa Linux nenzira iri nani. Dambudziko hombe nderekuti kana "distros" payakatanga kugadzirwa, linuxers haina kumbobvira yagadzirira kusvika pachibvumirano, nekudaro, mashandiro anoita "distro pepoX" (zita rakagadzirwa) haina kufanana (uye iri kune imwe nhanho zvisingawirirani) nemhando yekushandiswa kweiyo «distro ubuntuntún».
Distros inosiyaniswa pakati peiri nyore kushandisa asi isingagadzirike uye inonetsa kushandisa asi inogadziriswa. Ndiri kungoratidza mashoma:
Ubuntu zviri nyore kuisa, inogona kuiswa seWindows chirongwa, uye ine nzira yekuisa zvirongwa zvinonzi .deb (yakagadzirwa nevakatangira 'Debian«). Kugadzikana kwayo kwakaita kuti ive imwe yeanonyanya kufarirwa ma distros.
Kune rimwe divi tinaro Gentoo, distro zvakaoma kuisa uye kushandaVazhinji vanogona kuyedza kuiisa kakati wandei vasingabudirire, nekuda kweiyo nhamba ye "mapfundo" anofanirwa kufambiswa, asi zvinoenderana nevashandisi vayo, kana yagadzirira, iri nekukurumidza uye kuitirwa kuyera kwekombuta urikushandisei.
Zvichida fananidzo isina kukwana ye distros inogona kunge iri kutaura izvozvo XP ingave iri Windows distro, 98 imwe, Vista imwe zvichingodaro, asi iyo Linux distros isina kufanana neWindows vhezheni yakafanana kana yazvino, haisi shanduko nekufamba kwenguva asi nzira dzakasiyana dzekushanda nesystem.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Zvinorevei izvo "Distro" zvinoreva?
Ini handifunge kuti fananidzo yako yakanyatsokwana, nekuti windows yaizove distro uye sezvazviri chaizvo 98, xp, vista angave mavhezheni ayo, uye pane imwe distro inogona kunge iri windows server neshanduro dzayo 200, 2003, 2008
Ndakanga ndisingazivi .. ndatenda nekujekeswa nezve "distros".
Norman murimi akadaro
Ini ndinofarira iyi internet saiti zvinoita senge inobatsira zvakanyanya.
Pindura kuna Norman Tiller
Kutenda nekujekesa. Ichokwadi mushure memakore mashanu eWindows ndakaneta nemavhairasi uye zvese kupenga. Ndiri kuenda kuedza Linux. Ndinovimba uwane rombo rakanaka
red lego akadaro
Ini ndine ese masystem mune katsamba, uye zvirinani nemawindows ini handisati ndambove nematambudziko, ine linux shoma, pane nguva idzo vashandisi vasingazive mashandisiro avo, pamwe windows yanga isiri yako.
Pindura red lego
Cristian Jimenez akadaro
Zvakanaka, kune ino nyika yekugadzirwa pamberi pekombuta, hapana chinhu chiri nani pane kuve nesarudzo dzakawanda dzekuenzanisa izvo zvinonyatsokodzera zvaunoda uye wadii ... Linux nemashiripiti ayo anogadzirwa nemhuri yayo huru. Ichokwadi pakupedzisira chakanaka kuziva kuti iDistro nekuti ini ndanga ndave kutopenga, uye maererano nehurongwa ndinofunga kuti ini ndichasarudza Fedora yezvinhu zvaro uye nekushandisa pachako distro yakakura inozivikanwa seElementary OS 'Luna' asi ini haizodzime windows nekuti ndeye XD yekutanga uye chinhu icho hachionekwe zvakare muhupenyu chete kuti dambudziko rayo ndiko kusagadzikana kukuru nemapurogiramu anorema -_- mhedzisiro yeChirikadzi 8.1 asi hei ipapo ini ndine yakanakisa dhizaini suite yangu yeAdobe Caster Unganidzo Cs6 Chekutanga chimwe chinhu chinoita kunge chisina kumbobvira chavapo kune linux, handizvo here?
Pindura kuna Cristian Jiménez
Iko hakuna izwi 'rinoshandiswa' isu, raizove 'kushandisika', asi mukushandisa iwe wawaida kutaura, zvinonyanya 'kubatsira'
Pindura kuna adanela